Sony DPT-S1 ကိုဆက်လက်ရောင်းချသော်လည်းစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည် eReaders အားလုံး
Sony DPT-S1 သည်ဆက်လက်ရောင်းချသော်လည်းစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်
ယခုအပတ်တစ်လျှောက်လုံး Sony သည် Dpt-S1 နှင့်ပတ်သက်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောသတင်းများကိုကြားသိခဲ့ရသည် စတိုးဆိုင်များစတော့ရှယ်ယာထဲက run ပြီသည်အထိ.
အမှန်တရားကတော့လက်ရှိကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးe-eader eReader ပါ ၎င်းကို ဆက်လက်၍ ရောင်းချသော်လည်းစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချသည် ပုံမှန်ထက်။ အတိအကျ $ 100 စျေးသက်သာဆိုလိုသည်မှာ Sony DPT-S1 သည်၎င်း၏ပထမဆုံးစျေးနှုန်းထက်ဝက်နီးပါးရှိသည်။ယခုအပတ်တွင် Sony DPT-S1 သည်အချို့သောအွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များတွင် "Out of Stock" ဆိုင်းဘုတ်ကိုစတင်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ထပ်မံဖြည့်တင်းရန်မလိုတော့သည့်အတွက်ဆိုနီသည်ဤစက်ကိုမလုပ်တော့တော့ဟုအချက်ပြလိုက်သည်။ မမှန်ကန်တဲ့အရာတစ်ခုခု၊ ယခုမှစ။ ထိုကဲ့သို့သော device ကိုရရန်ပိုမိုခက်ခဲပါလိမ့်မည်.
Sony DPT-S1 သည်စျေးနှုန်းချိုသာသော်လည်းစျေးနှုန်းနိမ့်နေသော်လည်း
Sony ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တရားဝင်ဘာမှမသိရှိရပါ။ သို့သော်စျေးနှုန်းလျှော့ချခြင်းသည် Boox Max နှင့်အခြားထုတ်ကုန်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်လိုသောကြောင့်မဟုတ်ဘဲထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်ရန်လိုသည့်စတော့ရှယ်ယာအားလုံးကိုရောင်းလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်မှာရှင်းနေပါသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာကိရိယာသည်မဆိုးဟုထင်ရသော်လည်းစာဖတ်ခြင်းပုံစံများပိုမိုပါ ၀ င်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုတတ်နိုင်သောဈေးနှုန်းများကဲ့သို့သောကြီးမားသောတိုးတက်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
၎င်းဒြပ်စင်နှစ်ခုစလုံးသည် iPad Pro ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ် Onyx Boox Max eReader ကဲ့သို့သောအခြားစျေးကွက်တွင်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများရှိသည်။ Sony နှင့်ယောက်ျားများဆက်သွယ်လိုသောကဏ္ many သည်သုံးစွဲသူများနှင့်ကုမ္ပဏီများကပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ အမှန်တရားကတော့ ဆိုနီသည်၎င်း၏အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုဖြတ်သန်းနေခြင်းမဟုတ်ဘဲ၎င်း၏ gadgets အားလုံးတွင်ပြသသည် အမြဲတမ်းပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီးနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးအဖြစ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်သော်လည်းသင်မစဉ်းစားမိပါသလော။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » စာဖတ်သူများ » Sony DPT-S1 သည်ဆက်လက်ရောင်းချသော်လည်းစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်
အမေဇုံတွင်အရောင်မျက်နှာပြင်ပါသည့် eReader ရှိသလား။
ဘယ် Kindle ဒါမှမဟုတ် Kobo Touch2ကို ၀ ယ်မလဲ။